Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): December 2012
2013 ခုနှစ် အတွက် နှစ်သစ်လက်ဆောင် သီချင်းလေး ရေးပေးလိုက်တယ်။
at 12/31/2012 12:15:00 PM
မြန်မာအစိုးရကျောင်းတိုင်းမှာ သီဆိုနေသော ဇာတိမာန် သီချင်းလေးကို New Version အဖြစ်ရေးထားတာပါ။
၁. (ဒါတို့တိုင်း၊ ဒို့မြေ၊ တို့ မြန်မာပြည်)၂
(စုတ်ပဲ့တဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေ၊ မမတို့ ရွှေထီးရွှေနန်း ပျောက်ဆုံးပြီ။)၂
လာပါပြီ၊ သူတောင်းစားတွေကို မွေးထုတ်ပေးနေ၊
ရာဇ၀င်၊ ဒို့ရာဇ၀င်တွေ အမြဲတမ်းဆိုးနေ၊
ပိုင်ဆိုင်လာ၊ ဘိုးဘွားအမွေတွေ၊ အမြဲတမ်း ဒို့ဖြောင်လို့နေ၊
သံပြိုင်--- တက်လူတွေ၊ တက်လူတွေ၊ ဆေးရုံတက်တာ မပြီးနိုင်လေ၊
ပိုက်ဆံရှင်းတာ မတတ်နိုင်ပေ၊ အဲဒါအမှန်ပေ၊
အောက်က မခံဘူးဟေ့၊ အမျိုးသမီးတို့ရေ၊
အထက်က မနေနေ့ဟေ့၊ အမျိုးသားတို့ရေ၊
၂. ဗမာစစ်သားလေးတွေ တောင်းရမ်းစားလို့နေ၊
လောင်ချာ သေနတ်ကြီးတွေ ကိုယ်စီထမ်းကာလေ၊
သွေးသံရဲရဲ နဲ့ စစ်မီးမွေးမယ်လေ၊
By: Peter moe
မင်းကိုနိုင် မင်းပြောတဲ့ သမိုင်းအမှန်ကိုရှင်းပေးပါ
at 12/31/2012 11:39:00 AM
၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က သမိုင်း ကို အမှန်ရေးကြပြောကြပါဆိုလို့ ပြောလိုက်တော့မယ်။
မင်းကိုနိုင် ကိုကိုကြီး စသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ဆိုပြီး ကနေ့ ဖြစ်ပြနေတာ ဘာကြောင့်လဲ?
ဒီအတိုင်းတော့ ပရာ ကျော်ကုလားတွေလို၊ သကြား မုံန့်ဖက်ထုပ် ရောင်းတဲ့ လူတယောက်လို ၀ယ်ကြပါအုံန်းလို့ တကြော်ကြော် အော်ရင်း ၀ယ်သူရှာ အမြတ်ရလာမယ့်အေ၇းကို ကျိုးစားရင်း ဖြစ်လာကြတာတော့ မဟုတ်ပါ။
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အပါဝင် ၈၈ ကျောင်းများဆိုတဲ့ ဝေဇယန္တာ ရုံးခန်းက ပုဂ္ဂိုလ်များ ရထာဘူတကျကျစဉ်စားဖို့ လိုလာတဲ့ အချက်က ၈၈ ဆိုတာ လက်ရှိ အဆိုပါရုံးခန်းက လူတွေပဲ လုပ်လာတာပဲ။ လုပ်လာပြီး အခုလို ၈၈ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးကြီးကို တပြပြနဲ့ ငိုတလှယ်ရီတလှယ် လုပ်ပြပြီး တိုင်းပြည်ကို လှည့်လည်ပြီး ဆန္ဒပြနေသူတွေ ၊ကိုယ့် အခွင့်ရေးသူ့ အခွင့်ရေး မျှတရေးတွေကို ဆောင်ရွက်လာသူတွေကို လမ်းပေါ်တက်ရင်ပဲ ၂၀၀၈ နဲ့ မှတ်မျဉ်းထားပြီး ဥပဒေချိုးဖေါက်နေတယ်ဆိုတာ မျိုး အလုပ်မဖြစ်နိုင်တာမျိုး၊ ပြီးတော့ နောက်ပြန်လှည့်ခံရမှာမျိုး ကို ပြန်ဝါဒဖြန့် ပြလာတာကတော့ ၈၈တုန်းက သေသွားသူတွေ မမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ အသက် ဘ၀ ရှိသမျှ တိုင်းပြည်အတွက် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ပေးသွားကြသူတွေ မထားခဲ့တဲ့ ပရမတ် တခုဆိုတာ မြင်ဖို့ လိုလာတယ်။
၈၈ ဆိုတာ တပြည်လုံး လှည်းနေလှေအောက် မြင်းစောင်းမကျန် ၀င်ရောက် ဆန့်ကျင်ပြီး အာဏာရှင် တစုကို ဖြိုချပြတဲ့ နေရာမှာ တုနိုင်းမဲ့ရက်ရော တဲ့ သဒ္ဒါကို အခု ၈၈တွေ တမိနစ်စာလောက်ပြန်စဉ်းစားဖို့ လိုလာတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ အခု ၈၈ ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သိအောင် ပြောရရင် ၈၈ရဲ့ ပုံ၇ိပ် ကနေ့ထိဖြစ်နေတဲ့ မ၀င်းမော်ဦး ပြောခဲ့တဲ့ "ဒီမိုကရေစီ မရမခြင်း သမီးကို အမျှ မဝေပါနဲ့"ဆိုတဲ့ စကားဟာ အခု ရှစ်ပူးတွေ လူထုအတွက် ရှေ့မထွက်ပဲ ပန်းကုံးစွပ် လက်ခုပ်သြဘာ ရဖို့သာလုပ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ သတ္တိနဲ့ တောင်းဆိုသွားတဲ့ လူငယ် ကျောင်းသူတယောက်ရဲ့ သွေးအိုင်ထဲက မှာတမ်းကို
အထက (၂)ရှေ့မှာ လူမဆန်တဲ့ စစ်ဘီလူတွေပစ်ချခြင်းခံ၇တဲ့ မိချောင်းကန် အပိုင်း (၁) မြစာရံဘုရားလမ်း အိမ်အမှတ် 291 က လေးတန်းကျောင်းသားလေးက " ဦးရယ် သားတို့ကို မပစ်ပါနဲ့ ပြည်သူ့စစ်သား တို့စစ်သား" ဆိုပြီး အော်နေကြတဲ့ လေးတွေကို လူမဆန်တဲ့ လက်နက် အ၇န်းပစ်ခတ်ပြီး ကျဆုံးသွားသူ မျိုးထွန်းဦး၊ ဇမြောက်ပိုင်းရပ်ကွက် ဘုရားကြီးလမ်းထဲက အိမ်အမှတ် 240 မှာနေတဲ့ ၄ တန်းကျောင်းသူလေး မသီတာ ပြီးတော့ ၁၆ ရပ်ကွက်ထဲက ခလေး5ယောက် အပါဝင် အားလုံး ပေတရာ လမ်းမမှာ အရုပ်ကျိုးပြတ် ပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီမြင်ကွင်းလေးကို မင်းတို ၈၈ ထဲက အခု ခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် တယောက်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ထဲမှာ သွေးအလိပ်လိပ်နဲ့ လူးနေတဲ့ကြားက သူတို့ အိမ်မက် ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရမှ အမျှဝေပေးပါလေးဆိုတာကို ကျန်နေသေးတဲ့ အသက်ငွေ့ငွေ့နဲ့ မှာခဲ့တာ မင်းကိုနိုင် ကြားနေ မြင်နေမလားပဲ။
ကဲအခုတော့ ဒီမိုကရေစီတကယ်မရသေးပဲ မင်းတို့ အမျှဝေပြီး လိမ်လည်တဲ့ သာဓုတွေ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခေါ်ပေးနေတာ ငါတို့ကြားတယ်။
မင်းကိုနိုင် အပါဝင် ၈၈ ဆိုတာ တပြည်လုံး အတိုင်းတာနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ကြတာကို မင်းတို့ကပဲ မောင်ပိုင်စီးပြီး ထိပ်စီး တက်ယူထားတာကိုက တရားမျှတမှု ၊ တန်းတူမှု စတဲ့ ကျောင်းသား၇ဲဘော်တွေ ပြည်သူတွေ အသက် ဘ၀ စတာတွေကို နိဗ္ဗာန်န ပစ္စယော ဟောတုဆိုပြီး ပေးခဲ့တဲ့ သူတွေ သူရဲကောင်းတွေအားလုံးကို ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီး ကိုကိုကြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဒီမိုခရိုနီမင်္ဂလာဆောင် လာတက်တုန်းက ပြောသလို ၂၀၀၈ ကို ပဲ ဦးတည်ပြီး ၂၀၀၈ ဥပဒေအောက်က သွားရတော့မဲ့ အာဏာရှင် လက်ထဲက နွားရုပ်လေး တွေလို ဖိညစ် ကိုင်တွယ်ပုံသွင်းခံ၇တဲ့ ၇ွှံ့စေးတုံးလေးလို တတိုင်ပြည်လုံးကို သွားချင်တယ်ဆိုရင် ၈၈ ကျောင်းသားများ သိုမဟုတ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဆိုတာလေးကို ဖြုတ်ပေးပါ။ သေသွာသူ သူရဲကောင်းတွေက အဲဒီ အယူဝါဒတွေကို မှာသွားပြီး ခေါင်းချသွားတာမဟုတ်လို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ပယ်ဖျက်ပေးပါ။
တခုတော့ရှိတယ် အခု နိုင်ငံတကာက ၈၈ကျောင်းသားတွေထဲမှာ အရှောင်တွေရော အချောင်တွေရော လုပ်နေကြတဲ့ ပြောင်းလဲရေးဆိုပြီး ပြောတဲ့ကိုယ့်အခွင့်ရေးသူ့အခွင့်ရေး အရောင်းဝယ်မလုပ်နေသူတွေလို မင်းတို့ မလုပ်ဘူးဆိုရင် အခု မင်းတို့ရဲ ၈၈ မျိုးဆက်ဟာ ဖျက်မရတဲ့ သမိုင်းခေါင်းစီးမှာ ထာဝရ ထွန်းလင်းနေမှာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးစွဲချက်ဖြင့် ၂ ကြိမ်ထပ်မံ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသူ
at 12/31/2012 10:24:00 AM
By: Duwa Kachin ******************* ကချင်တွေ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု အကြောင်း စဉ်းစားလာတာ လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းကပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့ခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ ဗမာ လူမျိုးများတောင် လက်မခံတဲ့ ဗမာ စစ်ခေါင်းဆောင်များ အပိုင်စီးထားတဲ့ စစ်တပ်ဟာ တိုင်းရင်းသားများကို မခံချင်အောင် အမျိုးမျိုး ရန်စပြီး လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ဆက်ဆံ၊ မဒိမ်းကျင့်၊ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်၊ ဥပဒေမဲ့ လူသတ်၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး ဆက်ဆံနေခဲ့တာ လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းကပါ။ လွတ်လပ်ရေး ရရချင်း သူပုန် စလာတာ ဗမာ တွေပါ။ ရောင်စုံ သူပုန် ဆိုတာ ကချင်တွေ မပါဘူး။ အဲဒီ ရောင်စုံသူပုန်တွေကို နှိမ်နင်းခဲ့တာ ကချင် လက်နက်ကိုင် တပ်ရင်း (၁ မှ ၅ အထိ) ဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ရှည်နေမှာ စိုးလို့ စစ်အစိုးရ စတက်လာတော့ အသံကောင်းဟစ်ပြီး အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲမယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေလဲ ပါဝင်ပါ ဆိုပြီးခေါ်တော့ အပစ်ရပ်ခဲ့တယ်။ ညီလာခံတွေ တက်ခဲ့တယ်။ သို့သော် တိုင်းရင်းသားများ လိုလားတဲ့ အချက်တွေ တခုမှ မထည့်ပေးခဲ့ဘူး။ အဲဒီ အခြေခံဥပဒေ ကို လက်မခံတာ ကေအိုင်အေပဲ မဟုတ်။ ကျန် လက်နက်ကိုင် အပစ်ရပ် အဖွဲ့ အားလုံးဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့ပါ ဆိုပြီး အတင်းအကြပ် လုပ်တယ်။ အဲဒီ အစီအစဉ်ကိုလဲ နိုင်ငံရေးအရ ရပ်တည်ချက် ခိုင်မာ တဲ့ ဘယ် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေမှ လက်ခံတာ မတွေ့ပါ။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစ ပြီး ကေအိုင်အေ ကို ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ ပြင်ဆင်လာတယ်။ လိုင်ဇာ မြို့သားတွေ စစ်ဖြစ်လာရင် ထွက်ပြေးဖို့ ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာ ၂၀၀၉ ကတည်းကပါ။ ကေအိုင်အေ ဟာ လိုင်ဇာ ကို ဖက်သွယ်နေတာတော့ မဟုတ်.. ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်ဆုံး သူတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ခိုင်မာ တဲ့ နေရာ၊ ကချင်ကျောင်း၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု ခိုင်ခိုင်မာမာ လုပ်ထားတဲ့ နေရာမို့ ကာကွယ်ချင်တာ.. ဒါကို ဗမာ စစ်အုပ်စုက သိတယ်... လိုင်ဇာကို ဘာဖြစ်လို့ တိုက်သလဲ၊ ကချင်တွေရဲ့ ရပ်တည်ချက် (ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊) များကို ဖျက်စီးဖို့ ဖြစ်တယ်။ ကေအိုင်အေ ဆိုတာ လိုင်ဇာ တနေရာထဲမှာ ရှိတာ မဟုတ်။ လိုင်ဇာ သိမ်းရလို့ ကေအိုင်အေ ပျောက်သွားဖို့ မရှိ။ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၁) တည်ရှိရာ နေရာဆိုရင် ဘယ်သောအခါမှ ဗမာ အစိုးရ ရောက်ဖူးတဲ့ နေရာ မဟုတ်ပါ။ အင်္ဂလိပ် ခေတ်ကတောင် ကချင်ဒူဝါ များပဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ နေရာ ဖြစ်တယ်။ တောတောင် ထူထပ်ပြီး ဗမာ စစ်ကြောင်း ဘယ်လိုမှ ထိုးဖေါက်လို့ မရ။ ကေအိုင်အေ စစ်သား တပ်စိပ် တခုထဲ နှင့်တင် စစ်ကြောင်း တခုလုံးကို ထိန်းထားလို့ ရတဲ့ နေရာ ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကေအိုင်အေ ရဲ့ နေရာဟာ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ သုံးပုံ နှစ်ပုံ လောက် မြေဧရိယာကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ သဘော ဖြစ်တယ်။ လိုင်ဇာ ဆိုတာ သေးသေးလေး။ သုံးမိုင် ပတ်လည်ပဲ ရှိတာပါ။ နောက်တခုက တရုတ်အစိုးရ အတွက် တောင်အာရှ ထွက်ပေါက် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ၂၀၀၉ ကတည်းက တရုတ်အစိုးဟာ လိုင်ဇာ တဖက်ကမ်းမှာ ကုန်သွယ်ရေး ဂိတ် အကြီးစား တခု ဆောက်ခဲ့တယ်။ တပြိုင်နက်ထဲ မြစ်ကြီးနား တိုင်းမှူးတွေဟာ စသလို ပြောင်သလိုနဲ့ ကေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင်များကို လိုင်ဇာမြို့အပ်ဖို့ တောင်းဆိုတာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဒီတော့ လိုင်ဇာကို တိုက်ခြင်းသည် စစ်အစိုးရဟာ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့ အစီအစဉ်လုံးဝ မရှိတဲ့အပြင်၊ ကချင်လူမျိုးများကြား အမုန်းတရား ပိုရှည်လာအောင် ဖန်တီးရုံက လွဲပြီး ဘာမှ အကျိုးမရှိပါ။ ဗမာ စစ်တပ်ကို အားပေး အားမြောက်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေလဲ စစ်အုပ်စုက မဟုတ်ရင် တခု ဆက်စဉ်းစားစေချင်တယ်။ ကေအိုင်အေ ကို အချိန်တိုတိုနဲ့ အမြစ်ပြတ်တိုက်နိုင်ဖို့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ သိထားသင့်တယ်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ ကချင်ပြည် မြေပြင် အနေအထားမတူပါ။ ဒီတော့ ကေအိုင်အေ ကို အမြစ်ပျက် တိုက်ခိုင်းခြင်းသည်၊ ခင်များတို့ဟာ ခင်များတို့ စစ်ကျွန်ဘ၀မှာ အကြာကြီး နေချင်တယ် ဆိုပြီး တောင်းဆိုတာနဲ့ အတူတူ ဖြစ်တယ်။ စစ်တိုက်တယ် ဆိုတာ ခင်များတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ ပညာရေး အသုံးစရိတ် ပါသွားတယ် ဆိုတာ သတိရပါ။ ကေအိုင်အေ ဆိုတာ ကချင်လူမျိုးများနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်တပ် ဖြစ်တယ်.. အစိုးရ စစ်တပ်ကို ထိရင် ဗမာတွေ ရင်နာသလို... ကေအိုင်အေ ထိရင် ကချင်တွေ ရင်နာရမယ်။ ကချင်နဲ့ ဗမာ ကြား အမုန်းတရား ပိုရှည်လာရုံက လွဲပြီး ဘာမှ အကျိုးမရှိ။ ကချင်လူမျိုးအားလုံးကို အမြစ်ပြတ် တိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာ ရောက်နေတဲ့ ကချင်တွေ အများကြီး ကြည့်နေတယ်။ အီစ္စရေး လူမျိုးများကို လူမျိုးတုန်းတိုက်ခဲ့တဲ့ လူမျိုးတွေ တခါမှမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ လူမျိုးတုန်း မတိုက်တဲ့ အမျိုးတွေပဲ လူမျိုပြီး ပျောက်သွားတာ များပါတယ်။ တခုထဲသော ဖြေရှင်းနည်းဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး မူ ချမှတ်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်တွေ ပြည်ထောင်စုထဲ နေချင်ခဲ့တာ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု အတွက်ပါ။ ဗမာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် လူနည်းစုက ကြိုက်သလို ချေလည်တဲ့ ဘ၀မျိုးမဟုတ်။ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်ခွင့် ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေး အရ ဖြေရှင်မှ စစ်မှန်တဲ့ ပြောင်းလဲ မှု ဖြစ်ပါမယ်။ မာနယ်ပလော ကို နိုင်လို့ ကရင် တော်လှန်ရေး ပျောက်မသွား သလို၊ လိုင်ဇာ ကို ဗုံးကျဲလို့ ကေအိုင်အေ ပျောက်မသွားပါ။ ကချင်လူငယ်တွေကို ပိုစိတ်ဆွပေးရုံပဲ ရှိမှာပါ။
at 12/31/2012 10:05:00 AM
ပြည်သူလူထုရဲ့ နာကျင်ခံစားချက်များကိုကြည့်ကြပါ။ ကချင်လူမျိုးသာမက တိုင်းရင်းသားအားလုံးအပါအ၀င် ခံရတာပါ။ သွေးခွဲခြင်းမဟုတ် အမှန်တရားများအားဖော် ထုတ်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း —
at 12/31/2012 09:56:00 AM
Myitrum manang ni, “ Nhtoi 28.12.2012 ” ngu ai M Ga shagawp shagun dat ai yaw. Majan shiga gaw matut manoi gasat hkat nga ai re. Dung 23 Bumre post hpe M ni n lu n da htim gasat nga sai. Dai post lu la hkra shanhte marai 500 asi hkam na ngu ndau ai sha n-ga, nbungli tank4hte gaja wa shakrip ai; mani bum lagaw gate ngu na post kaji hpe anhte ni yen kau ra mat ai. Nbungli n lang yang gaw, anhte lu manga ai. Mani mung nbungli 5-6 lang gap bun ai majaw n dang hkam wa ai. Mani hpawt 8:00-9:00AM hta nbungli langai gaw lu gap dat ai. Mana nsin sin wa mahka, Hangkaibum na shawoi agap bun nga ai myawksi Miwa hkran de3wa di hkrat bang ai kaw na loi sim mat ai; lama Miwa hkran de n hkrat bun yang, anhte hpang de kade naw gap bun na n chye tsun ai. Mana de LZ mare ntsa nbung jawng tsit tsit san ai poi gayin dan hkawm ai. Noikret Magwi sumla langai jahkrat dat ai. Hta la nhtawm awu asin di kabai kau ya masai da. M ni gaw manya zawn rai hkrup mara she galaw si wa masai. 29.12.12 shani gaw MKAeLZ hpe awng padang lu sai, LZ wan hkat mat sai ngu, Yesu sumla ni nat dan rai, hpungki ni yan hkawm let dandaran hkawm ma ai shiga na lu ai. Daihpawt jau jau mung majan pa de bom ni grai ngoi ai. “ Dap Ba 5, Ginjaw Ginra Shim Lam Dap Ba”amatu kyu dum nga mi yaw.
နေ့စွဲ - ၂၈.၁၂.၂၀၁၂
၂၂၈ နှစ်မြောက်ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးအချူပ်အခြာအာဏာကျဆုံးသည့်နှင့် ရခိုင်တော်လှန်းရေးနေ့ 
at 12/31/2012 09:53:00 AM
အောက့်မေ့ဖွယ် အခန့် အနားကို နယ်သာလန်နိုင်ငံရောက်ရခိုင်မျိုးချစ်များက ပြုလုပ်ကျင့်ပခဲ့ပါသည်
at 12/31/2012 09:39:00 AM
USA kaw nga ai Wunpawng niansen
at 12/31/2012 09:24:00 AM
USA kaw nga ai Wunpawng niansen re. STOP Killing Civilians in Kachin State. (Burma)
at 12/31/2012 09:18:00 AM
by: FB/Lahpai Zau Zen Let and7other friends shared Duwa Kachin's photo. ။ ********************
လိုင်ဇာမြို့တော်ကို ရခိုင်တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာ ညိုသွင်အောင် နှင့် အဖွဲ့ ရောက်နေကြောင်း သိရသည်။ သတင်းထောက်များကို ပြောရာမှာ "ကျနော်တို့က ရခိုင်တပ်တွေပါ" လို့ ပြောလာကြောင်း သိရသည်။ "ကနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ ဘုံရန်သူရှိနေပါတယ်... ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ မဟာ မိတ်တွေပါ" လို့ပြောပါတယ်။ အသက် ၃၂ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ညိုသွင်အောင်ဟာ ရန်ကုန် ဆေးသက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်း ဖြစ်ပြီး ရခိုင် အမျိုးသားများအတွက် တရားမျှတရေး နဲ့ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နဲ့ ရခိုင် အမျိုးသား အရေးကိစ္စမှန်သမျှ ရခိုင် အမျိုးသားများရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်သာ ဖြစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းလဲ ထည့်ပြောပါတယ်။ ရခိုင်တပ်တွေလဲ ကချင်ဖက်ပါပြီ။ ******************** လိုင်ဇာမြို့တော်ကို ရခိုင်တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာ ညိုသွင်အောင် နှင့် အဖွဲ့ ရောက်နေကြောင်း သိရသည်။ သတင်းထောက်များကို ပြောရာမှာ "ကျနော်တို့က ရခိုင်တပ်တွေပါ" လို့ ပြောလာကြောင်း သိရသည်။ "ကနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ ဘုံရန်သူရှိနေပါတယ်... ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ မဟာ မိတ်တွေပါ" လို့ပြောပါတယ်။ အသက် ၃၂ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ညိုသွင်အောင်ဟာ ရန်ကုန် ဆေးသက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်း ဖြစ်ပြီး ရခိုင် အမျိုးသားများအတွက် တရားမျှတရေး နဲ့ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နဲ့ ရခိုင် အမျိုးသား အရေးကိစ္စမှန်သမျှ ရခိုင် အမျိုးသားများရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်သာ ဖြစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းလဲ ထည့်ပြောပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု မဟုတ်. . .
at 12/30/2012 12:39:00 PM
လက်နက်နဲ့ အင်အားသုံး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သိမ်းသွင်းလို့ရတာ လက်နက်နိုင်ငံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု မပေါ်မချင်း၊ သူပုန် ဆိုတာ ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ မတရားမှုတွေ ရှိနေသေးသရွေ့ တော်လှန်ရေး ဆိုတာ ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ နိဂုံး မဟုတ်ပါဘူး။ နိဒါန်းအသစ် တခု ထပ်မံမွေးဖွားဖို့ အစ ပျိုးနေတာပါ။ By/ချိုတူးဇော် fb
at 12/30/2012 12:32:00 PM
by?facebook Maha MingyiKhin Mgoo about an hour ago ယနေ့ နံနက် 8 နာ 10 မိနစ် နှင့်9နာရီ 10 မိနစ် အတွင်းဝယ် တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီး2နှစ်ကြီမ် လာရောက်ပြီး တကြိမ်လျင် ရုရှား လုပ် ရော့ကက် ဆပ်ဗင်ဆန် အား ၄ လုံး အသုံးပြုပြီ ပစ်ခတ်သည့်အပြင် 120 ပေါင် ရှိသော မြေပြင် ခွဲဗုံး အလုံး20 ခန့်ပစ်ချကြောင်း စစ်ပြေးဒုက္ခသယ်များနှင် အလွန်နီးစပ်သော နေရာများ တွင် ကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီး အထိခိုက်မရှိကြောင်း သိရသည်။ မြေပြင် စစ်ကြောင်3းကြောင်း လိုင်ဇာတ၀ိုက်ဖြစ်သော လက်ဂျာ၇န်တွင် ချီတက် တပ်စွဲပြီး အချိန်မရွေး မြေပြင်မှ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်လာနိုင်ကြောင်း ၄င်းတို့ ဖြန့်ကျက်ချထားသော စစ်အင်းအား 800 ၀န်းကျင်ခန့်ရှိကြောင်း တပ်မ 101 လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ခမရ ၃၁၇၊ ၄၁၇၊ ၄၁၆ မှ အင်အား ဖြည့်စွက်ပြီး လက်ဂျားယန် ပင်မလမ်းကြောင်းတွင် စစ်ကြောင်း ၂ကြောင်း ခွဲပြီး စစ်ပြင်နေကြကြောင်း၊ အခြား စစ်ကြောင်းတခုဖြစ်သော တပ်မ ၈၈ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၃ရင်းမှ အင်း ၄၀၀ ကျော်ဖြင့် လက်ဂျာယန် တောင် ဘက်မှ ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ ချီတက်လာကြောင်း သိရသည်။ ရှေ့တန်း စစ်မြေပြင်၏ ရှေ့ဆုံး စစ်ဆင်ရေး စစ်တား စစ်နှောက်ရန် အချို့ တောင်ကုန်းများတွင် နေရာယူထားကြသော ABSDFရှေ့ ကင်း စခန်း အချို့ ဆုတ်ခွာပေးထားပြီး ထိုးစစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် ပြန်လည်စီမံထားကြောင်းသိရသည်။ လက်ဂျာယန်တွင် ကျောင်းသား တပ်မတော်၏ တာဝန်ရှိသူ ကိုလှဆိုင်းမှ "ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ ယခုကဲ့သို့ တ၇ားမမျှတသော စစ်ဆင်ရေးကြီးတခု ဆင်နွဲပြီး လူမျိုးတုန်း ရှင်းလင်းရန် စီစဉ်ပြီး ယခု ကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ယုံကြည်မှုများ အကြီးကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးပြီး ယခုကဲ့သို့ စစ်ပွဲများ တပြည်လုံး အတိုင်းတာဖြင့် ပြန့်နှံ့လာနိုင်ကြောင်းရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်အနေဖြင့် ယခုစစ်ပွဲအား တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကော်မတီ၏၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအား လက်တွေ့ အကောင်ထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက် စေလိုပြီး၊ ယနေ့ ကချင် ပြည်သူများကလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ် အသိမှတ်ပြုထားဆဲဖြစ်ပြီး အားကိုးလောက်ယုံကြည်လောက်သော ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ပြည်သူပြည်သားများကို လုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေ အမှန်တကယ်စိုးမိုးမှုကို ဖေါ်ဆောင်ပေးရန်လိုပါတယ်" ဟုပြောဆိုကာ တိုက်ပွဲအတွင်းသို့ ပြေးဝင် ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်မှု ယာယီဖြတ်တောက်ထားခဲ့ပါသည်။ ကချင်စစ်ပွဲ အတွင်းမှ တိုက်ရိုက် သတင်းပေးပို့ပါသည်။ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ တင်ပြပေးနေပါမည်။ THE MOST RIDICULOUS SPEECH EVER..(video click on link)
Map location: Burma army planes attack KIO positions near rebel capital
at 12/30/2012 12:01:00 PM
By: kachinnews.com read more++click on link
God Bless Kachin .....by Dujan Lahtaw Nang Ja ( Sin Lun Pang Mu ) —Kyuhpyi karum/ Video
at 12/30/2012 04:54:00 AM
Manu dan ai kyuhpyi num hte ga video click on link
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap hte mung shawaamatu ahkyu hpyi lamang galaw
at 12/30/2012 04:49:00 AM
Ginjaw Laiza de laja lana Myen ni htim gasat wa ai majaw, Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap share shagan ningbaw ningla, kaji kaba, MHH magam gun ni, Hpyen hprawng tsinyam ni, magam dap shagu, mung shawa hpe yu lakawn nga ai local NGOs magam gun ni hte maigan de anhte amyu sha nialam hta tsap magam gun nga ai niamatu akyu hpyi lamang galaw ai sumla rai nga ai.
Afghanistan hta American hte shanhteaalliance ni madang dep ai nbungli, laknak ni hte shaning law law gasat wa sai raitim, dai ginra na lachyawk mi sha re ai hpyen ni hpe dai ni du hkra padang dip ai lam nnga ma ai. Anhte Karai Kasang hpe kam sham ai, tara ai lam hta tsap nna gasat nga ga ai re majaw perish byin na lam n'nga ai ngu nna, hpung woi sara Langchyaw Sau Chang kaw nna n gun jaw mungga hte shatsam wa sai.
Myu Tsaw Share Shagan kaji kaba yawngantsa hpan wa Karai bau sin ya nga u ga,
at 12/30/2012 04:23:00 AM
ကချင် ဌာနချုပ် လိုင်ဇာခံစစ်တောင်ကုန်းတွေကို
အစိုးရက လေယဉ်တွေနဲ့ သုံး တိုက်ခိုက်နေတာနဲ့ 
ပတ်သက်ပြီး ကေအိုင်အို ပြောခွင့်ရသူ ဦးလနန်နဲ
့ DVB တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်း။ (30/12/2012)
ှSalang Ka ba Lanan hte DVB, shiga dap ni a
at 12/29/2012 07:29:00 PM
Burma Air Force jets and MI24 attack helicopters attacking the Kachin in Kachin State, northern Burma. At 08:00 hrs this morning, 29 December, Burma Air Force jets attacked Kachin (Kachin Independence Army- KIA) positions at Lajaiyang 10 kilometers southwest of the town of Laiza, Kachin State.
— Photos of Burma Air Force jets and MI24 (5 photos)
Hpakan uru seng maw na shiga
at 12/29/2012 07:23:00 PM
2012 ning, July Shata hta Hpakant Muklum, Shan Kone lawk kaw byin lai wa ai mabyin langai hpe shana dat ai.
Slg. Jang Maw La Nan hte kaga marai (7) jawm hpawng nga yang, n sen langai ngoi wa nna dai marai 8 yawng hkum ting hkat mat ma ai. Chemical bawm kabai bun ai rai na re nga nna sawn tak la ma ai re. Raitim, marai langai mi gaw, kata palawng ahpraw hpun da ai shiahkum ni kaw gaw hpa n byin ai lam mau hpa mu lu ai nga nna Slg. Jang Maw La Nanakana tsun dan lai wa sai re. Slg. Jang Maw La Nan gaw Myikyina tsi rung kaw du ai hpang shani jang dai wunma hte si mat sai lam chye lu ai.
Ngaianingmu gaw, Ya, myen ni lang taw ai chemical bawm gaw palawng ahpraw kaw n hkat hkra na re ngu, mu mada ai. N dai lam ni hpe mung chyeju hte seng ang ai Du Salang ni hpe tsun dan ya rit yaw. Karai Kasang shaman ya u ga.
at 12/29/2012 11:05:00 AM
LAIZA, Kachin State—A little-known rebel group of Buddhist soldiers from western Burma are fighting alongside mostly Christian Kachin soldiers in the country’s far north, asawar with the government’s army for greater autonomy and basic rights continues to escalate. “We are the Arakan Army,” says Dr. Nyo Twan Awng, the militia’s second-in-command. The rebel group from Arakan State in the country’s west comprises “400 to 500 soldiers,” says the doctor, of which over half have trained or fought in Burma’s northern Kachin State since the group’s founding in 2008 and the resumption of war in Kachin in mid-2011. Right now Nyo Twan Awng and nine colleagues are staying in territory held by the Kachin Independence Army (KIA), one of Burma’s largest ethnic minority militias. The KIA is currently fighting the Burma Army at scattered outposts across the rugged northern region, mostly in areas close to the Burma-China frontier, inawar that castsapall over the much-lauded political and economic reforms undertaken by the Burmese government. “The government is the same as before,” contends Nyo Twan Awng. “The generals just change their uniforms to suits to look civilian.” The Arakan Army (AA) has fought “on the front line” since the collapse of ceasefire between the KIA and the government army in June 2011, says Nyo Twan Awng. “We haveacommon enemy, and the KIA are our friends.” With his arms folded, 32-year-old Nyo Twan Awng,aRangoon-trained medical doctor, displays the AA logo, an osprey half-covered withared seven-pointed star, with two NATO logo-like four-pointed stars on either side. “The four points represent the historic Arakan dynasties,” says Nyo Twan Awng. The last such kingdom fell to an invading Burmese imperial force in 1784. Since then, Arakan has been ruled by either British colonialists or Burmese. Asked why the AA was established—if it sought greater autonomy for Arakan State or even independence—Nyo Twan Awng says the organization’s purpose is “to protect our Arakan people, and to establish peace and justice and freedom and development.” “As for the political status of Arakan, that is for the Arakan people to decide,” he adds. Asked his opinion of the reforms in Burma, he wrinkles his brow. “You know my thoughts about this government,” he says. And when it comes to Burma’s best-known politician, he is dismissive. “Aung San Suu Kyi is Burmese, she doesn’t know about the ethnic people,” he says. “She speaks many words but does nothing.” Opposition leader Aung San Suu Kyi has been criticized for not addressing the war in Kachin State, and for giving evasive-sounding replies when asked her views on the riots and pogroms in Arakan State, where since June tens of thousands of civilians, mostly Rohingya Muslims, have been driven from their homes in communal violence. Suu Kyi has received criticism from Arakanese politicians—notably the Rakhine Nationalalities Development Party (RNDP)—for not takingaharsh enough line against the Rohingya. Burma’s government says the Rohingya are not entitled to citizenship, according toa1982 law, and many Burmese view the Rohingya as illegal immigrants from Bangladesh. “It isacomplicated issue,” Nyo Twan Awng says of the recent violence in Arakan State and the position of Rohingya in Burmese society. In July, President Thein Sein floatedacontroversial idea that the Rohingya be resettled en masse to third countries. “It should be done something like this, yes,” Nyo Twan Awng says, nodding in agreement. Asked about the AA’s future plans, he says, “We have members scattered all along the Thailand, India and Bangladesh borders,” but does not say if or when the group will coalesce in Arakan State. (IRRYAWADDY) Photo: Far From Home, Arakan Rebels Fight on Kachin Frontline ================================== LAIZA, Kachin State—A little-known rebel group of Buddhist soldiers from western Burma are fighting alongside mostly Christian Kachin soldiers in the country’s far north, asawar with the government’s army for greater autonomy and basic rights continues to escalate. “We are the Arakan Army,” says Dr. Nyo Twan Awng, the militia’s second-in-command. The rebel group from Arakan State in the country’s west comprises “400 to 500 soldiers,” says the doctor, of which over half have trained or fought in Burma’s northern Kachin State since the group’s founding in 2008 and the resumption of war in Kachin in mid-2011. Right now Nyo Twan Awng and nine colleagues are staying in territory held by the Kachin Independence Army (KIA), one of Burma’s largest ethnic minority militias. The KIA is currently fighting the Burma Army at scattered outposts across the rugged northern region, mostly in areas close to the Burma-China frontier, inawar that castsapall over the much-lauded political and economic reforms undertaken by the Burmese government. “The government is the same as before,” contends Nyo Twan Awng. “The generals just change their uniforms to suits to look civilian.” The Arakan Army (AA) has fought “on the front line” since the collapse of ceasefire between the KIA and the government army in June 2011, says Nyo Twan Awng. “We haveacommon enemy, and the KIA are our friends.” With his arms folded, 32-year-old Nyo Twan Awng,aRangoon-trained medical doctor, displays the AA logo, an osprey half-covered withared seven-pointed star, with two NATO logo-like four-pointed stars on either side. “The four points represent the historic Arakan dynasties,” says Nyo Twan Awng. The last such kingdom fell to an invading Burmese imperial force in 1784. Since then, Arakan has been ruled by either British colonialists or Burmese. Asked why the AA was established—if it sought greater autonomy for Arakan State or even independence—Nyo Twan Awng says the organization’s purpose is “to protect our Arakan people, and to establish peace and justice and freedom and development.” “As for the political status of Arakan, that is for the Arakan people to decide,” he adds. Asked his opinion of the reforms in Burma, he wrinkles his brow. “You know my thoughts about this government,” he says. And when it comes to Burma’s best-known politician, he is dismissive. “Aung San Suu Kyi is Burmese, she doesn’t know about the ethnic people,” he says. “She speaks many words but does nothing.” Opposition leader Aung San Suu Kyi has been criticized for not addressing the war in Kachin State, and for giving evasive-sounding replies when asked her views on the riots and pogroms in Arakan State, where since June tens of thousands of civilians, mostly Rohingya Muslims, have been driven from their homes in communal violence. Suu Kyi has received criticism from Arakanese politicians—notably the Rakhine Nationalalities Development Party (RNDP)—for not takingaharsh enough line against the Rohingya. Burma’s government says the Rohingya are not entitled to citizenship, according toa1982 law, and many Burmese view the Rohingya as illegal immigrants from Bangladesh. “It isacomplicated issue,” Nyo Twan Awng says of the recent violence in Arakan State and the position of Rohingya in Burmese society. In July, President Thein Sein floatedacontroversial idea that the Rohingya be resettled en masse to third countries. “It should be done something like this, yes,” Nyo Twan Awng says, nodding in agreement. Asked about the AA’s future plans, he says, “We have members scattered all along the Thailand, India and Bangladesh borders,” but does not say if or when the group will coalesce in Arakan State. (IRRYAWADDY) Share facebook
at 12/29/2012 10:02:00 AM
ဒီတစ်ခါ မတူသော မျိုးရိုးများ အကြောင်း ရေးပေးလိုက်တယ်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးသော နလပိန်းတုံး ဘုရင် စောက်ပေါ (သို့) သီပေါ ရဲ့ မျိုးရိုး တွေဟာ ယခုထိ ကုလားပြည်မှာ ထာဝရကျွန်ဖြစ်နေတာကို သနားမိတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ လှည်းကူးမြို့နယ်မှာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်က ကူးစက်လာတဲ့ အနူရောဂါကြောင့် အနူ မျိုးရိုး ဖြစ်သွားတဲ့ ရွာကို လုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦး က သူမသေခင် တစ်လ တစ်ကြိမ် သွားရောက် ပြီး အလှူအတန်းလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ယခုထိ အဲသည် အနူသည်တွေရဲ့ ဘ၀ဟာ သနားစရာပါ။ ဗမာပြည်အလယ်ပိုင်းမှာ ယခုထိ တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် လိုက်လံတောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်းစား မျိုးရိုး တွေရှိတယ်။ သူတို့ဟာ ဆင်းရဲလို့ တောင်းစားတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ မျိုးရိုးကိုက မတောင်းစားရင် မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာလို့ တစ်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ် ရုပ်ဖျက်၊ ခွက်ကိုင်ပြီး တောင်းစားနေရတဲ့သူတွေကလည်း သနားစရာလေးတွေပါ။ နောက်ထပ် သနားစရာ မျိုးရိုး ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗမာလား၊ မြန်မာလား၊ ဗမာက မှန်သလား၊ မြန်မာကဘဲ မှန်သလား ဆိုပြီး သိသိကျကျ၊ ဂဃနဏ မဝေခွဲတတ်သေးတဲ့ အူကြောင်ကြား မျိုးရိုး တွေကတော့ သန်း ၄၀ လောက်ရှိနေတယ်။ By : peter moe
SALANG GABA LA NAN (KIO) &BBC ..DEC 28,2012(Video)Click on
at 12/29/2012 09:24:00 AM
SALANG GABA LA NAN (KIO) &BBC ..DEC 28,2012
Anya Dik ai
at 12/29/2012 08:49:00 AM
Myitrum manang ni, “ Anya Dik Ai” ngu ai M Ga shagawp shagun dat ai. Mani Jet nbungli 2, LZ mareeningwan du ai. Hpyendap bumebom jahkrat bun ai. Masha n rawng ai ginsum langai hkru ai. Nbungli langai mi lu gap dat ai, MKA hpyen nbungli dabang Mawhpawng kaw wa kapaw mat ai lam na lu ai. Mani tup myawk ni grai gap bun ai;raitim U langai, Wa langai sha si ai. Anga2dinggret ai, Dung 23 kaw na Dkb. Naw Dinaginsum makau kaw Myawk kaba langai wa hkrat tim kadai hpa n byin ai; Chyeju shakawn ga. LZ mare masha hte hpyen-yen ni kabring kabrawng rai jawng mat ai. Shana de Nawku Jawngenawku daw jau kyu hpyi nga ga yang, Nalung M balik dap kawngeaging gasat hkat nga ai lam hte lam3maga na hpyen ni yan lung wa ai shiga shang wa ai majaw, lak san kyu aja awa bai hpyi ga ai. WP sha ni yawng kyu hpyi nga ai shiga na lu ai majaw, grai n-gun lu ai. Marai3myit hkrum yang panglai pyi lu htawk ai da. Annau ni myit hkrum yang Awmdawm lu chyalu rai na re; Kamsham let,
at 12/28/2012 01:43:00 PM
ဒီမနက် လိုင်ဇာမြို့နဲ့ KIA စစ်တပ်ကို စစ်လေယာဉ် ၂ စီးနဲ့ ပစ်ထားပြီး2စီးနဲ့ ကွန်မန်ဒိုများ ချခဲ့ပါတယ်၊ ဂျက် အမျိုးအစား ၂ စီးဖြစ်ပြီး ဟယ်လီကောပ်တာ ၂ စီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
မနေ့က ရွှေလီမြို့ ယူရီ ရေပူစမ်းဟော်တယ်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော် အရာရှိများနဲ့ တရုတ် တပ်မတော် အရာရှိများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီဟော်တယ်မှာဘဲ တည်းခိုပြီး ညပိုင်းမှာလည်း ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်.
global action day with Burma campaign groups in all over the world. Ask the overseas Kachin community to make protest in front of Burmese embassies and Parliaments.
at 12/28/2012 12:54:00 PM
Dear N'gun Ja Wa, Thank you very much for your kind explanation. I think you need to makeaglobal action day with Burma campaign groups in all over the world. Ask the overseas Kachin community to make protest in front of Burmese embassies and Parliaments. Makeaspecial team to send5Permanent members of UNSC to sendaspecial envoy to there. Invite overseas media to report ground situation to spread info about IDP and refugees. we needacomprehensive actions now despite of the holidays seasons in rich countries. let me know where i can invite kachin overseas groups in Australia. I will help as much as i can as i do support minority rights and federalism and God Blesses you and take care. best wishes, NK
CSW urges Burma’s government to stop military offensive against Kachin immediately
at 12/28/2012 12:44:00 PM
Andrew Johnston, CSW’s Advocacy Director, said: “The dramatic escalation in the Burma Army’s assault on the Kachin is deeply disturbing. To launch aerial attacks and deploy fighter jets and helicopter gunships marks the most serious intensification in this conflict since the war began. The government of Burma must be urged to stop this offensive immediately, and engage inagenuine peace process. The KIA, and its political arm, the Kachin Independence Organisation (KIO), are seeking autonomy and equal rights inafederal, democratic Burma, not secession, and have made clear their desire to talk. But they are demandingagenuine peace process, involvingapolitical dialogue, to findalasting solution to decades of war, not simplyaceasefire. President Thein Sein and his government present an image of reform to the world, but how can reform be serious if it is accompanied by fighter jets and helicopter gunships? Unless reform is accompanied byagenuine peace process, it will not lead to the lasting change Burma’s people desire and deserve. The international community must take this latest escalation very seriously, and must make it clear to Thein Sein that unless the Burma Army’s offensive stops andapeace process begins, international pressure will be applied.”
မတူသော အရူးများ (၂)
at 12/28/2012 12:31:00 PM
ဒီတစ်ခါ ကျန်နေသေးတဲ့ မတူသော အရူးများ အကြောင်းကို ရေးပေးလိုက်တယ်။
ပြင်ဦးလွင်ရှိ DSA ကျောင်းတွင် ဗိုလ်လောင်းတက်ခွင့် ရရန်အတွက် ကြိုးစားပန်းစား လုပ်ပြီး ဖင်ခံသွားနေကြသော ဗိုလ်လောင်းရူးများလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ ကားများ၊ တစ်ပတ်ရစ်ကားများကို မြန်မာနိုင်ငံထဲ သယ်လာပြီး ၀ယ်ယူသူတွေက ဖင်ခေါင်းက ခပ်ကျယ်ကျယ်၊ အသံက ခပ်မာမာနဲ့ မောင်းစီးနေကြတဲ့ ကားရူးများလည်း ရှိသေးတယ်။
ု ငမ်းငမ်းတက် လိုချင်၊သုံးချင်နေတဲ့ ဗမာစစ်တပ်ထဲမှ လက်နက်ရူးတွေကလည်း ရိုက်သတ်လို့ မကုန်နိုင်အောင်ပါဘဲ။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို လည်တဆံ့ဆံ့ စောင့်မျှော်နေကြပြီး ရလာမယ့် ဒေါ်လာတွေကို အပိုင်ဖြောင်ဖို့ ကြံနေကြတဲ့ အကြံရူးတွေကလည်း ၀န်ကြီးဌာနတိုင်းမှာ တစ်ပုံတစ်ခေါင်းပါ။
လာဘ်စားတာ မကောင်းတာသိရက်နဲ့ လာဘ်ငွေတွေကို မဟားဒယား ရယူနေကြတဲ့ လာဘ်ရူးတွေကတော့ ဗမာအစိုးရ၀န်ထမ်းတိုင်းလို့ ပြောရင် မမှားပါဘူး။
Kachin follow-up 28122012 12pm
at 12/28/2012 12:16:00 PM
DVB TV news click on link
ကချင်တိုက်ပွဲ အခြေအနေ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် (၂၈-၁၂-၂၀၁၂)
အခုလို အချိန်မှာ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်ခင်ဗျားတို့ ရပ်နေတဲ့ နေရာမှာ တွေ့ရာသချိုင်း ဓါးမဆိုင်းဘဲ စစ်အာဏာရှင်တွေကို တိုက်သင့်တယ်။
at 12/28/2012 12:12:00 PM
by/ face book Khin Mgoo 叶方方
အခုလို အချိန်မှာ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်တဲ့ လူတချို့ ကချင် ဥက္ကဌကြီး ဘရန်ဆိုင်းရဲ့ ကျေးဇူး တချို့တ၀က်လောက်ကိုပဲ မှတ်မိကြမယ်ဆိုရင်၊ စစ်ရေး မဟာမိတ် ဆိုပြီး ထိုးခဲ့တဲ့ လက်မှတ်တွေကို မှတ်မိကြမယ်ဆိုရင်၊ ငါတို့လည်း တိုင်းရင်းသားတမျိုးပါလား ဆိုတာကို တွေးတော တတ်မယ်ဆိုရင်။ ကချင်စစ်ပွဲဟာ လူမျိုးတခုတည်းရဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့ ခုခံစစ် မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ စဉ်းစားမိကြမယ်ဆိုရင်၊ မာနယ်ပုလော တိုက်ပွဲမှာ ကချင်ရဲဘော်တွေ မြောက်ပိုင်းက တောင်ပိုင်းကို လာပြီး ကူတိုက်ပေးတာတွေကို မှတ်မိမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ရပ်နေတဲ့ နေရာမှာ တွေ့ရာသချိုင်း ဓါးမဆိုင်းဘဲ စစ်အာဏာရှင်တွေကို တိုက်သင့်တယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ငါတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ မီးဆိုတာ မလောင်ခင် ၀ိုင်း မတားရင် တောက်လျှောက်လောင်မှာပါပဲ။ ကောင်းမြတ်သော ဘုရားသခင် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ။ ဘာသာမတူရင်တော့ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ခင်ဗျာ။
Khin Mgoo and2other friends sharedaphoto.
December 28, 2012 by Myitkyina blog news
The renewed civil war in Northern Burma and the intention of Burmese Army
at 12/28/2012 11:59:00 AM
by N'gun Ja Wa on Thursday, December 27, 2012 at 9:50pm ·
It has never been official KIO policy for independent Kachin since 1970s. It has always asked for greater autonomy within the Union of Myanmar or Burma asaconstitute federal state. But demands were never properly addressed by successive Burmese military and civilian governments. Instead ethnic politicians were given prions terms along with U Nu by Gen Ne Win, when the military stagedacoup in 1962.
Formerly the KIO was formed to separate form the Union in their formative years. It reversed its stance around 1972-74 to demand forafederal Union Burma ever since. It is stated official policy of KIO.
KIA has fought vicious civil war with the successive governments.Neither side is winning the war. Either side can't defeat the other. So, ceasefire was signed in 1994 anticipatingapolitical solution. No real political dialogue was forthcoming. The KIO attended the Nyaung Na Pin conference to submit their proposals along with 13 other ceasefire groups. The ethnics proposals wasn't even in agenda. The KIO came home disappointed. In any case, fast forward, the KIO rejected the BGF proposal by SPDC like all other major armed ethnic groups.
Yet, there wasareasonable peace in Kachin state for 17 years. However, the newly elected quasi-civilian government didn't handle the KIA well. The government fired the first shot for the renewed conflict in June 9th 2011 on the pretext to createasecurity perimeter around the Chinese built hydro-electricity plant, which is deep inside KIO administered areas.
Things are out of control now. To stop the current escalating conflict, all we need is from the government to stop sending fresh reinforcements around KIA controlled areas. Only can we start political dialogue. (as you are well aware, there is no concrete promise by the Government to begin political dialogue with any of the current "cease-fired groups yet)
Bri-Gen Tun Tun Naung of Northern Command atarecent preliminary talk with KIO peace delegation
The conflict is in abating as recent as December 24th, 2012, the KIA was given ultimatum by Brig-Gen Tun Tun Naung of Northen Military Command to withdraw from KIO military post just 12 miles (20 km) from Laiza, KIO administrative HQs by Christmas day. Laiza also house more than 70,000 Kachin IDPs, who will suffer the brunt of the Burmese Army atrocities. It was seen by many Kachin inside Burma/Myanmar and diaspora as one of the most outrageous provocation as most Kachin are mainly Christians.
As no less than 40 rounds of 105 mm Howitzer and numerous rounds of 120 mm mortars are shelled on positions around Laiza everyday for the past few days, major government offensive against Laiza is expected in coming days.
Anyone familiar with Burma issues for the past decades will tell you there is no military solution to Burma ethnic jigsaws. Burma ethincs conflict are some of the longest in the world. Then, why is the so-called reform minded President Thein Sein government launching one of the largest military operation since 1995. Officially, Burmese Government is not at war with KIA, as the President said so on various occasions. The situations on the ground is on the contrary. The Radio Free Asia news reported this morning that two farm workers are dead and several other are injured from the government mortars shells. Where is the Burmese military headed? To wither the KIA once and for all? But at what price?
The KIO now have reasons to believe that the Burmese Army for is here for the kill and not in the mood to haveapolitical dialogue. So, the question is why is the Burmese Army using more than 120 battalions to deal with the KIA while alienating hundred and thousand of Kachin civilians. If this continues, it will reach toaboiling point where they will be no turning back on both sides. Kachin civilians will suffer as collateral damage. Let's give political dialogueachance.
N'gun Ja Wa
Dec. 28, Burma Army began Ariel assault with4fighter jets against Laiza. The planes approached from China side.
at 12/28/2012 11:52:00 AM
by/facebook WP Hkanan
‎28,12,2012 Laiza bu ni kaduk kaw rawng ra taw ai,, n bungli 1 gap jahkrat sai da,, miwa de shang nna gawai la la di ai nga na ai,,Kasat n bung li jetahpraw re kaba hteagying gap ai re nga na lu ai n bungli mying gaw shanhte mung kaduk na sha mu dat dat di ai majawatsawm n chye ai lam, n bungli4hteagyingagang htim kasat taw ai re lam, Myutsaw share shagan ni mungagying ninghkap kasat taw ai lam hte Bawm n sen ni gying kadu taw sai lam na lu ai,, shiga ni hpe matut ka na n ngai,,,ya mung n sen na ding yang re,,11:13 am myen hkying
Chyeju dum Let
at 12/28/2012 09:32:00 AM
Myitrum manang ni, “ Chyeju dum Let” ngu ai M Ga shagawp shagun dat ai. Mani mung jau jau kaw na jan du lup M ni myawk dum bun ma ai raiyang, Laja Yang lawu na Miwa Gyinhkyau sunelani mi ks- 7000 hte gunjang jang sha sa ai Mungmasha ni hte Hpyen-yen ni kaw myawk kapaw hkyep ni hkra bun ai majaw, marai 1 si,4tsi rung du mat ai. Mana nsineNtap Bum de M ni lagaw lam hte nut lung wa sai lam na lu ai hpang, gasat hkat masai nga ai shiga bai na lu ai. Kyu grai hpyi nga ga ai. M ni gaw shara shagu masha n-gun, lak nak n-gun jahpring jahting shachyen da nna, anhte hpe yen mu, hprawng mu myawk sharut bun sana nga, myit n ngwi n sim n sa hkra jahkrit shama nga ma ai. Myit nau n sam ai ni gaw gaja wa hkrit gari nchyi nmu byin nga ma ai. Kaduk htu shajang ma ai. ( Shanglawt Tsing gaw grai myit sam nna, hpa mung n hkrit ai da!) Daihpawt 3:00AM hta mung myawk ni grai ngoi ai. Myitrum manang ni LZ hpe majen nna kyu hpyi dum ai majaw, grai kabu ai. Matut hpyi ga yaw. Chyeju kaba u ga.
at 12/27/2012 07:23:00 PM
By SIMON ROUGHNEEN / THE IRRAWADDY| December 27, 2012 |
2013 ခုနှစ် အတွက် နှစ်သစ်လက်ဆောင် သီချင်းလေး ရေးပေ...
မင်းကိုနိုင် မင်းပြောတဲ့ သမိုင်းအမှန်ကိုရှင်းပေးပါ...
Map location: Burma army planes attack KIO positio...
God Bless Kachin .....by Dujan Lahtaw Nang Ja ( Si...
Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpyendap hte mung shawa...
FBR Report: Photos of Burma Air Force jets and MI2...
SALANG GABA LA NAN (KIO) &BBC ..DEC 28,2012(Video)...
ွှ့There wasameeting of Myanmar Army Officers and...
global action day with Burma campaign groups in al...
အခုလို အချိန်မှာ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်...
မြန်မာစစ်တပ်က လေကွဲမီးလောင်လက်နက်၊ ဓါတုလက်နက်အသုံး...
The renewed civil war in Northern Burma and the in...
Dec. 28, Burma Army began Ariel assault with4fig...
မတူတာလေးတွေ, BY : FB
LAIZA NA Hkristmas Myuzik
ဒီတစ်ခါ မတူသော မသာများ အကြောင်း ရေးပေးလိုက်တယ်။
မန်မာ့စစ်တပ်ကို KIA ၀တ်စုံထုတ်ပေးထား
Mali yang kaw na M ni lu lai lung wa magang sai n...
ဟဲဟိုးလေဆိပ် အဆင်းမှာ ပျက်ကျခဲ့တဲ့ အဲပုဂံလေယာဉ်က ခ...
ဒီပုံထဲကလူတွေ ဟာ KIA, စစ်ဗိုလ်တွေ လား..? ခင်းများတ...
ဒီတစ်ခါ မတူတာက ရှင်းနေတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးပေးလိုက...
Kabu gara Hkristmas Poi / NGOI PYAW AI X MAS
ကချင်လူမျိုးများ၏ ခရစ္စမတ်လက်ဆောင် 2012
ဒီတစ်ခါ မတူသော အခွင့်ထူးခံများအကြောင်း ရေးပေးလိုက်...
(By: Bertil Lintner ) More war than peace in Myanm...
Garum pawn ba laga
ဒီတစ်ခါ ဗမာအစိုးရ ကိုင်စွဲထားတဲ့ လက်ကိုင်တုတ် ကြီး...
ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေ အရှိန် အဟုန်မြှင့် လာလို့ ...
ဒီတစ်ခါ မတူသော အဓိကများကို ရေးပေးးလိုက်တယ်။
ကေအိုင်အေဟာ အိမ်နီးနားချင်းနိူင်ငံကြီးရဲ့ ထောက်ပံ့...
From BBC news about Kachin ( video) click on link
စစ်ဆင်ရေး စီမံချက်ဆုံးရှုံးသော ဒီဇင်ဘာ(၁၄) လဂျားယန်...
ကျီးစာ လင်းတ စာ ဖြစ်ကုန်တော့မယ်
KIA forces raid police station in Hpakant
No end in sight to Myanmar conflict: mediator
PETER A SHANA AI LAIKA
ဒီတစ်ခါတော့ မတူသော လှည့်ဖျား popular များအကြောင်း ...
ကချင်-ဗမာ သွေးခွဲနေသော အဖမဲ့သားများအတွက် ...လေ့လာရ...
တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းကို နိုင်ငံတကာက Gထာက်ခံ တဲ့။
ကချင်ပြည်နယ်စစ်ရေး ( VIDEO ) CLICK ON LINK
ကားမိုင်းမြို့ရဲစခန်းသည် ခရီးသွား ကချင်အမျိုးသားမျ...
For Burmese General,Army,Theinsien,Crony ( You hav...
STATEMENT ON THE BURMESE GOVERMENT'S DUAL-TRACK PO...
သိန်းစိန် ဦးဆောင်နေတဲ့ စစ်အစိုးရအုပ်စု ကချင်တွေကိ...
WORLD WAR3IN KACHIN.
Difference between KIA and tat madaw
Shawng Lam De
Nawku Hpung hte seng ai Shiga langai shagun dat ya...
တပ်မတော်က ပြည်သူ့ အတွက်လား အဲဒီလူကြီးတွေအတွက်လား”
Marit N Wai
လက်ပန်တောင်းကိစ္စ သတင်းထောက်များနဲ့ ဗိုလ်ဆန်းအောင် ...
MP ဦးဂျေယောဝု နဲ့ ကချင်အရေးမေးမြန်းခန်း(video)
ဒီတစ်ခါ မတူတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာတွေကို ရေးပေးလိုက်တ...
Shang Lawm Rit
Myitkyina kaw na shiga
Ninghkring niaGa malai ni (daw I )